I-RED BEE MEDIA IQALA UKUTHUTHA KWE-RED LAB E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS - NAB Bonisa izindaba nge-Broadcast Beat, umsakazo osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-RED BEE MEDIA IQALA UKUTHUTHA OKUQALA KWE-RED LAB E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS
I-Red Bee Media ivule indawo yabo yesibili yeLabhu elibomvu e-Hilversum, eNetherlands. I-Red Lab Hilversum izogxila ekuthuthukiseni komkhiqizo, ukuhlolwa nokubonakaliswa kwezixazululo ze-IP nesofthiwe ye-acquisition video, ukucindezela, iminikelo nokusabalalisa amasevisi. Ngaphansi kwegama leLebhu Elibomvu, i-Red Bee Media isungula imizamo yayo ye-R & D ngezikhungo eziningi ezixhunyiwe kuwo wonke umhlaba. I-Lab yokuqala yokuqala evulekile eLondon ngoFebhuwari 2019 futhi indawo yesithathu izosungulwa eStockholm phakathi nonyaka.
"I-Red Lab Hilversum isinika ithuba elikhulu lokuthuthukisa nokuhlola amakhono ethu we-IP anikwe amandla, ukwandisa inani esililetha kumakhasimende ethu kumasevisi wevidiyo abukhoma nokukhiqizwa okude. Sizibophezele ukubeka inkundla yesikhulumi sezinkulungwane eziningi enhliziyweni yalokho esikwenzayo njengomhlinzeki wezinsizakalo eziphethwe yi-agile embonini yokusakaza kanye nabezindaba ", kusho uKris Langbridge, Head of Distribution Services, Red Bee Media.
"Ngokuhlanganiswa kwe-Red Lab London ne-Red Lab Hilversum, manje sizokwazi ukubonisa ukuphela kokusebenza kwe-IP phakathi kwamazwe amaningi futhi sibonise ukuthi i-Red Bee Media iholele kanjani imboni ku-multi-IP technology technology platform", kusho uDavid Travis , I-Chief Services Officer, i-Red Bee Media.
Ukuqalisa i-Red Lab Hilversum, i-Red Bee Media yenza isilingo esiyimpumelelo yezobuchwepheshe be-IP. Icala lihilele ukuhlola ukuthi kungenzeka yini ukuletha ividiyo engaxilongwa nge-uxhumano oluxubile olude (2 x 35 km) ukusuka e-Amsterdam Arena kuya kwisiteji sokuhlola se-MCR ku-Red Lab Hilversum. Njengoba uxhumano lwe-IP oluqinile lwe-100%, lunikeza isignali ephawulekayo ye-1080p HLG HDR, ukuhlolwa kwaba yimpumelelo.
"Leli cwaningo laliphumelele kakhulu futhi liqinisekisile imiklamo yethu yokusabalalisa ama-protocol nama-packet ethunyelwe. Sakwazi ukwelula nokuthuthukisa amakhono we-teknolojia yethu yamanje, okwengeza izingxenye ezinqamulelayo zokuphuma kwegazi ngokusebenzisa izinyathelo zayo. Ngenxa yalolu cwaningo, manje sinalo lonke uhlu olusha lwemibono ejabulisayo yokuhlola nabalingani bethu "kusho uHenk den Bok, uMphathi weMkhiqizo oyiSikimu, Izinsizakalo Zokusabalalisa, i-Red Bee Media.
I-RED LAB HILVERSUM
Izakhiwo zokuhlola izixazululo ezisuselwa ku-IP ngemikhakha yevidiyo kanye nokusatshalaliswa kwezinsiza (kubandakanya ukuhlelwa kwevidiyo, ukuguqulwa kwe-SD kuya ku-IP, i-FPGA, ukuzenzekelayo, ukulawula nokuqapha)
Zokuthuthukisa umkhiqizo izixazululo ezintsha zokubhekana nezinselelo ezihambelanayo nokuthuthela emisebenzini ye-IP esekelwe (kubandakanya ukuqinisekiswa kwe-PTP, ukufezekisa ukulahlekelwa kwepakethe yonkana kuwo wonke amanethiwekhi ahlukanisiwe, nokuphepha).
Imibukiso kubonisa iphothifoliyo yezinsizakalo eziphethwe yi-Red Bee Medias kumnikelo wevidiyo obukhoma, ukusekhoda kwe-software-based based and services distribution
I-Press Release - I-Red Lab Hilversum - (NL) i-2019-07-10
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uthinte
UJesper Wendel, iNhloko Yezokuxhumana, i-Red Bee Media
Mayelana ne-Red Bee Media
I-Red Bee Media iyinkampani ehamba phambili yensizakalo yemidiya yemisebenzi yabasebenzi abangaphezu kuka-2500 service media kanye nokusakaza ochwepheshe. Njengoba ihhovisi legatsha eLondon, UK, i-Red Bee Media inikeza izinsizakalo ezivela kuma-main hubs e-11 emhlabeni jikelele. Nsuku zonke, izigidi zabantu kuzo zonke amazwekazi zibuka izinhlelo zethelevishini ezilungiselelwe, eziphathwe futhi zisakazwa ngabasebenzi be-Red Bee Media. Njalo ngonyaka, ibhizinisi linikeza amahora angu-4 amahora wokuhlela ngezilimi ezingaphezu kuka-60 + ezingaphezu kwezingxube ze-500 TV. Izinsizakalo ze-OTT ze-Red Bee Media zifaka ukuhanjiswa okubukhoma kweziteshi ze-233 zabasakazo kanye neziteshi ze-119 ezenzelwe ukuhlinzekwa kwabanikezeli abayizigidi ezingu-1.7. Iphothifoliyo yokutholakala kokuqukethwe kwenkampani idlulisa ngaphezu kwama-movie we-10 wezigidi nezihloko zohlelo, ezihlanganisa izilimi ze-25, futhi ifaka phakathi idatha yesithombe enezingxenye ezingaphezulu kwe-90 yazo zonke izinhlelo ezitholakala ku-TV yendabuko, i-VOD ne-SVOD. I-Red Bee Media iphinde inikeze amahora angu-200,000 wamazwibela ngonyaka - ngaphezulu kwamahora angu-70,000 aphilayo. I-Red Bee Media ingumqashi olinganayo, ngokugxila ngokucacile ekutholeni ukuhlukahluka nokudala indawo yokusebenzela ebandakanya yonke inhlangano yonke. www.redbeemedia.com
Okuthunyelwe kwakamuva ngu-Ericsson (bona konke)
I-RED BEE MEDIA IQALA UKUTHUTHA OKUQALA KWE-RED LAB E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS - Julayi 10, i-2019
I-RED BEE MEDIA PARTNERS NE-SWEDISH NENDA - UKUKHULUMELA UKUQALA OKUQHELEKILE UKUHLELWA KWEZINDLELA EZIPHAKATHI ZAMASEBENZI EMHLABENI WONKE NGOKUPHATHWA KWE-OTT - Julayi 9, i-2019
I-RED BEE MEDIA EWAKHELEKILE I-DPP ETHIWEYO YOKUPHEPHA UMARKO E-BROADCAST NOKUTHUTHUKISA - Meyi 24, 2019
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Cobalt Encoder Umnikelo I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Ott I-Red Bee Media I-Lab ebomvu I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo	2019-07-10
Ngaphambilini: I-Audio Visual Production Specialist
Olandelayo: I-LIVEU IBC 2019 PREVIEW